Maquillage tsotra, fanao andavanandro
« Déodorant » natoraly amboarina ao an-trano
Raha tia mampiasa akora natoraly ianao hikarakarana endrika amam-bika dia isan’ireo azo atao tsara sy azo atao ny manamboatra « déodorant » natoraly.
Azo ampiasaina amin’ny « maquillage » ny talc bébé
Te hanana volomaso matevintevina sy lava, maniry ny hanana tarehy tsy misy pentina, tsy mora mitera-menaka… Andramo ireto paipaika telo hampiasana ny « talc » fanao amin’ny zazakely ireto, dia ho hitanao fa hahazo ireo vokatra ireo ianao !
Diloilo coco : Tsy mampisy kôlesterôly raha handrahoina!
Isan’ireo mpampiasa ny diloilo voanio isika eto Madagasikara. Betsaka tokoa ireo voka-tsoa entin’ity akora ity.
Azo fantarina ny ranomanitra tena « authentique » …
Efa betsaka ny vehivavy malagasy mankafy sy manangona karazana ranomanitra vokarin’ireo marika lehibe maneran-tany amin’izao.
Karazana « maquillage » azo hanaovana miasa
Tsy mitovy ny fomba fanaovana ny « maquillage » fitondra miasa, sy ireo entina mamonjy lanonana, entina mivavaka, na hamonjy fotoana manokana, …
Tsy mbola nikitika tarehy mihitsy : ahoana no hanombohana azy ?
Maro be amin’ny vehivavy Malagasy no tsy tia na tsy sahy mikitikita tarehy, raha tsy efa misy olana sedraina ilay hodi-tava. Somary mandiso ihany anefa izay fiheverana izay, hoy ny matihanina amin’ny kolo endrika, satria mila kolokoloina izany hatsaran-tarehy izany mba hateza. Sady mitazona ny hatsaran’ilay tarehy izany, no misoroka ny fahanterany aloha loatra ihany koa …
Mamantatra ny lokomena manendrika …
Ny lokomena ihany dia efa manaingo ny endrika iray sy manatsara azy. Raha vao tsy manendrika sady tsy mifanaraka amin’ny endrika sy ny molotra anefa ny lokomena anaovana dia ny mifamadika amin’izay indray no vokatra azo. Eo no mipetraka ny fanontaniana : mety aminao ve ny lokomena anaovanao sy tianao ?
Ny hodi-tava metisy no ananan’ny ankamaroan’ny vehivavy Malagasy. Tsy sarotra ny manaingo azy io, saingy mila omanina tsara kosa, mialohan’ny hanaovana “maquillage”…
Fikarakarana ny hoditra
Ny dingana voalohany amin’ny fanaovana “maquillage” dia ny fikarakarana ny hodi-tava. Hosorana “crème” manamandina azy aloha ny tarehy. Asiana “base matifiante » ihany koa, hampalefaka sy hampalamalama tsara ny hoditra, mandrapaharivan’ny andro.
Fanosorana « fond de teint »
Rehefa malama tsara ny hodi-tava dia ny « fond de teint fluide » no tsara ampiasaina aminy. Raha tsy dia malama kosa ny hoditra dia aleo misafidy ny « fond de teint » manana toetra matevina, fa mampalandina ny tarehy. Toy izao ny fisafidianana ny « fond de teint » : asiana kely eo amin’ny takolaka, andrasana roa minitra eo ho eo ary jerena amin’ny toerana mazava raha mitovy amin’ny lokon’ny hoditra. Raha tsy mitovy dia soloina loko hafa. Misy ireo mihevitra fa ny fampiasana “fond de teint » fotsy kokoa noho ny lokon’ny hodi-tava no mampivoaka ny « maquillage ». Diso izany, fa ny “embelisseur” no akora mampamiratra kokoa ny « maquillage ».
Fampiasana « blush »
Tsara ihany koa ny manana “blush » sy mampiasa azy foana rehefa hamarana maquillage. Ny loko somary volom-boasary dia mifanaraka tsara amin’ny hoditra somary matroka. Ary satria mitroka loko ny hodi-tava mitera-menaka, dia tsara safidiana, noho izany ireo produit be marevaka kokoa. Rehefa hisafidy manjamaso, dia ireo somary manjelatra no ampiasaina ary raha te hanosotra ireo tsy mangirana dia tena ilay karazany “mat” tanteraka no ampiasaina.
Fandokoana ny molotra
Samy hafa ny lokon’ny molotra ambony sy ambany. Samy hafa ihany koa ny hoditra mandrafitra azy ireo. Raha tiana hifaritra kokoa ny haben’ny molotra dia faritana amin’ny “crayon” matroka ny sisin’ny molotra ary asiana lokomena mazava loko kokoa ao anatiny. Ny mifanohitra amin’izay no atao, raha tiana hanify kokoa ny endriky ny molotra.
Fisafidianana ny “mascara”
Matetika, fohy sy tsy dia matevina loatra ny volomason’ireo vehivavy manana hodi-tava somary mainty. Ireo mascara “volumateur”, noho izany no ampiasaina. Apetraka eo ambony volomaso, any amin’ny fotony mihitsy ilay borosina “mascara” , vao sintonina miakatra.
Mba hampitana tsara ny lokomena dia asiana “crème” aloha ny molotra. Soritana amin’ny “crayon contour” avy eo. Mihosotra base ( ilay crayon no atao base, na izay lokomena ampiasaina ihany) ary mamerina manosotra “poudre” sy lokomena indray. Faranana amin’ny “gloss”, raha tiana hangirana nefa azo avela ho tsotra ihany koa, araka izay itiavana azy.
Isaorana ny “Charm’elle Beauté” Ampasampito tamin’ny fiarah-miasa. Fifandraisana : 034 13 538 18 – 033 24 332 05